इंग्ल्याण्डविरुद्ध पुजाराको शतक, भारतको अग्रता ! - इंग्ल्याण्डविरुद्ध पुजाराको शतक, भारतको अग्रता !
इंग्ल्याण्डविरुद्ध पुजाराको शतक, भारतको अग्रता !
२०७५, १५ भदौ, 04:52:54 PM
लण्डन । इंग्ल्याण्डसँगको चौथो टेस्टमा भारतका व्याट्सम्यान चेतेश्वर पुजाराले शतक बनाएका छन । पहिलो र दोश्रो टेस्टमा खराब प्रदर्शन गरेका उनले चौथो टेस्टमा शतक बनाएका हुन ।
२ सय २८ बलको सामना गरेका उनले १३ चौका हानेर शतक बनाएका हुन । टेस्ट क्रिकेटमा १५ औँ शतक बनाएका पुजारा भारतका टप अर्डरका व्याट्सम्यान हुन ।
पछिल्लो समय खासै फर्ममा नदेखिएका पुजारा पुनः लयमा फर्किएका छन । उनको लयले भारतले पहिलो पालीमा अग्रता समेत लिएको छ । इंग्ल्याण्डलाई २ सय ४६ रनमा अलआउट गरेको भारतले पहिलो पालीमा २ सय ४६ रन कटाएको छ ।
र अग्रता लिन शुरु गरेको छ । राम्रो शुरुवात गरेपनि ओपनर व्याट्सम्यान सस्तैमा आउट हुँदा भारत दबाबमा परेको थियो । लोकेश राहुल १९ रनमा आउट हुँदा शिखर धवन २३ रनमा पेभेलिएन फर्किएका थिए । दुबै जनालाई इंग्ल्याण्डका स्टुआर्ट ब्रोडले आउट गरेका हुन ।
तेश्रो विकेटका लागि पुजारा र कप्तान विराट कोहली मिलेर ९२ रनको साझेदारी गरेका थिए । कोहली भने ४६ रनमा आउट भए । त्यसपछि आएका व्याट्सम्यानलाई इंग्ल्याण्डका मोइन अलिले लगातार आउट गरेका थिए । उनले ५ विकेट लिए ।
तर पुजाराले एउटा इण्डबाट टिकेर खेल्दा भारतले अग्रता लिन शुरु गरेको हो । अन्तिम व्याट्सम्यानका रुपमा जस्प्रित बुम्राहले साथ दिदा पुजाराले शतक बनाउनुका साथै भारतलाई अग्रता लिन सहज भएको हो ।